Ny fizarana ny mpanjifa no lakilanao amin'ny fitomboan'ny orinasa amin'ny 2016 | Martech Zone
Ny fizarana ny mpanjifa no lakilanao amin'ny fitomboan'ny orinasa amin'ny 2016
Sabotsy, Janoary 23, 2016 Alahady 24 Janoary 2016 Dane Atkinson
Ao amin'ny 2016, ny fizarana manan-tsaina dia hitana andraikitra lehibe amin'ny drafitry ny mpivarotra. Mila mahafantatra eo amin'ny mpihaino ny mpanjifa sy ny vinavinany iza izy ireo iza no tena mirona sy manan-kery indrindra. Miaramila miaraka amin'ity fampahalalana ity, afaka mandefa hafatra kendrena sy mifandraika amin'ity vondrona ity izy ireo izay hampiroborobo ny varotra, ny fitazomana ary ny tsy fivadihana amin'ny ankapobeny.
Fitaovana teknolojia iray izay efa misy ankehitriny ho an'ny fizarana manazava ny fizarana Audient Segmentation avy SumAll, mpamatsy angona mifandraika Analytics. Ity serivisy ity dia mampiasa angona nangonina avy amina orinasa 500,000 mahery sy mpanjifa iray tapitrisa mahery. Ity tahiry goavambe marobe ity dia misy angon-drakitra demografika ary koa ny fitaoman'ny media sosialy an'ilay olona. Ny orinasa iray dia afaka mampakatra ny angon-drakitra fifandraisany amin'ny mailaka ao amin'ny Segmentation ho an'ny Mpihaino ary mahazo angon-drakitra momba ny lahy sy ny vavy, ny toerana, ny taonany ary ny angona media sosialy.
Miaraka amin'ity fampahalalana ity, ny mpivarotra dia afaka mamorona fanentanana kendrena amin'ny alàlan'ny fantsona maro samihafa, toy ny tambajotra sosialy, sehatra fanaovana dokam-barotra, mailaka ary fampiroboroboana amin'ny birao fanampiana manokana. Ny segmentation dia mamela ny famoronana atiny izay misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny fiainan'ny mpanjifa. Ny mailaka izay mamporisika ny mpandray "hanaraka anay amin'ny Instagram" dia misy dikany bebe kokoa rehefa voamarina fa manana kaonty Instagram farafaharatsiny izy ireo. Ny hetsika "manaraka" avy eo dia mitaky tsindry iray na roa, fa tsy ny fizotran'ny fisoratana anarana manontolo.
Ity misy drafitra iray an'ny Fizarana SumAll mpihaino dingana ary ny fomba ahafahan'ny mpivarotra mampiasa ireo hevi-baovao azo avy amin'izany:
Orinasa iray mampakatra ny lisitry ny mailaka
Ny motera SumAll dia mahita kaonty Facebook, Twitter, ary Instagram an'ny mpisera
Ny haavon'ny fifamatorana sy ny fitaomana eo amin'ny tamba-jotra tsirairay dia dinihina. Ny fampiroboroboana dia matetika ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'io tranonkala sosialy io, ary ny fitaomana dia ny isan'ny mpanaraka azy.
Ny demografika dia nalaina tamin'ny alàlan'ny fanondroana ny adiresy mailaka miaraka amin'ny tahiry lehibe
Ity fitaovana ity dia misy koa fizarana mandroso ho an'ireo mpampiasa Twitter izay mamela ny mpivarotra hametraka ny lisitry ny tahony Twitter ary avy eo hisintona ny mailaka sy ny fampahalalana momba ny demografika. Ireo mpivarotra dia afaka mandany loharano hananganana Twitter aorian'ny fahatokisany fa azon'izy ireo ampiasaina ireo mpanaraka azy ireo amin'ny alàlan'ny fifandraisana an-tserasera.
Io no fantsona marobe amina fantsona izay tombony lehibe amin'ny fizarana toy izany. Manantena ny mpanjifa hanana traikefa tsy miova sy mahasarika ny mpanjifa, na mifanerasera amin'ny marika amin'ny alàlan'ny Instagram izy ireo na amin'ny alàlan'ny birao fanampiana chat. Fitaovana toy ny Audition Segmentation matanjaka satria afaka mitarika mpivarotra amin'ny ambaratongam-pifandraisana mety hananan'ny mpampiasa amin'ny fantsona sosialy izany. Diniho ny olona roa, samy manana kaonty Instagram, fa ny iray manana mpanaraka fito, ary ny iray manana mpanaraka 42.4. Raha mivondrona ao anaty fampielezan-kevitra “Instagram” izy roa ireo dia hisy ny valiny sasany, saingy tsy namboarina. Ireo mpanjifa na vinavina miaraka amina fanarahana be dia be dia mitaky fanentanana namboarina sy tolotra fampiroboroboana satria mety lehibe ny sandany amin'io fantsona io.
Ny fampahalalam-baovao momba ny fizarazarana ara-tsosialy dia azo ampiasaina ihany koa mba hampahafantarana ny takelaka fanampiana, CRM, ary ireo sehatra marketing automatique hafa momba ny mpanjifa sarobidy. Ohatra, ny latabatra fanampiana sy rafi-telefaona fanampiana dia mety manome marika ireo mpampiasa miaraka amina mpanaraka Twitter maherin'ny 100,000, miaraka amin'ny torolàlana ho an'ilay masoivoho hanome azy ireo fifanarahana na fampiroboroboana manokana amin'ny Twitter. Lasibatra kokoa io fomba fiasa io, ary manatanteraka ny filan'ny mpanjifa marobe hita toy ny isam-batan'olona, ​​indrindra raha manao varotra toa izany amin'ny fomba milamina sy tsy manelingelina ny mpivarotra.
Ny fizarana toy izany izay misy ny fampahalalana momba ny taona sy ny demografika dia mahatonga ny filalaovana AdWords matanjaka ihany koa, satria ny mpivarotra dia afaka mampifanaraka ny doka nasehon'izy ireo amin'ny andiana mpanjifa sasany. Manome azy ireo làlana hividianana teny fanalahidy sarobidy izy ireo, saingy ho an'ny mpihaino kendrena ihany izany mba tsy hihoaran'ny fanaraha-maso ny fandaniana.
Ny segmentation dia mivoatra mihoatra ny demografika tsotra (20-35 taona any Massachusetts), ho sehatra vaovao izay misy ny fitondran-tena amin'ny tambajotra sosialy sy ny hetsika hafa izay manome ny mpivarotra fomba fijery milamina sy mifandraika kokoa amin'ny mpanjifany.
Manomboha amin'ny SumAll maimaim-poana!
Tags: CRMFacebookhelpdesksegmentationfanadihadiana ara-tsosialysumallTwitter
Dane Atkinson dia nanomboka ny orinasany voalohany, SenseNet Inc., tamin'ny faha-18 taonany. Ny orinasa dia nitombo tamin'ny alàlan'ny fanompoana ireo orinasa Fortune 500 (WPP, Pfizer, Lucent) ho an'ny mpiasa an-jatony amin'ny kaontinanta telo. Nanomboka teo dia nanana asa nahomby tamin'ny naha mpanatanteraka teknolojia azy izy ary nanangana, nividy ary nivarotra orinasa am-polony mahery. Ny haino aman-jery momba ny haitao sy ny varotra ananany dia manampy antsika hanolotra serivisy manankarena ho an'ny mpanjifantsika. Ankoatry ny toerany amin'ny maha CEO azy, Dane koa dia mpanolotsaina sy mpikambana ao amin'ny birao amin'ny orinasa teknolojia maromaro.
Misy ifandraisany: Teknolojia fitsikilovana mailaka mivantana
Ny refy 3 an'ny tetikady marketing amin'ny mailaka voalanjalanja
24 Jan 2016 amin'ny 2:19 PM
Dane, misy B2B mitovy amin'io serivisy io ve?